သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ BROWSER ကို UPDATE လုပ်ဖို့ကဘယ်လို - ဖုန်းကို - 2019
စမတ်ဖုန်းအများအပြားအသုံးပြုသူများအတွက် Android နှင့် iOS device ကိုအပြေးအင်တာနက်များ၏မူလတန်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကွန်ယက်အဆင်ပြေပြေနဲ့လုံခြုံအသုံးပြုမှု browser ၏အချိန်မီ update ကိုဆိုလိုနှင့်ယနေ့ကျွန်တော်ပြုမိရဲ့ပုံကိုသင်ပြောပြချင်။
ကိုယ်တိုင် Google Play စတိုးမှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ် APK ကို-file ကို by: အန်းဒရွိုက်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဘရောက်ဇာကို update လုပ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာ။ တစ်ခုချင်းစီကို option ကိုအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်။
Method ကို 1: Store ကို Play
ကို web browser များအပါအဝင် applications များ၏အဓိကအရင်းအမြစ်, အန်းဒရွိုက် OS ကို Play Store ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပလက်ဖောင်းမှာလည်းထည့်သွင်းဆော့ဖျဝဲကို update များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ သငျသညျအလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများ disable လျှင်, နောက်ဆုံးပေါ် software ကိုဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းကိုယ်တိုင်နိုင်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာဖို့ desktop သို့မဟုတ် menu ကိုဖြတ်လမ်းကြည့်ရှု Google Play စ Market က ထိုသို့အပေါ် tapnite ။
main menu ကိုဖွင့်ဖို့သုံးနှင့်သူရဲများခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဓိက menu ကနေ "ကျနော့် apps များနှင့်ဂိမ်းများ".
ကို default tab ကိုဖွင့်လှစ် "အပ်ဒိတ်များ"။ အောက်ကိုဆင်းနှင့်သင့် browser ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Update ကို".
Method ကို 2: APK ကို-file ကို
အများအပြား Third-party firmware အတွက် Play စတိုးအပါအဝင်မရှိ, Google apps များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြစ်ကြသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ရရှိနိုင်အကူအညီဖြင့် browser ကို update ကို။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ APK အား-file ကိုသုံးပြီး Third-party store ကိုအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ် update ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Android အတွက် APK အားဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ခြယ်လှယ်ရဲ့ start မီ, သေချာဖုန်းကိုဖိုင်တစ်ဖိုင်မန်နေဂျာရှိပြီး, Third-party ရင်းမြစ်များမှ application များ install လုပ်နိုင်စွမ်းလည်းပါဝင်သည်ပါစေ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒီ feature ကိုသက်ဝင်:
အန်းဒရွိုက် 7.1.2 နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Settings" ကို.
စာစောင်ကို "လုံခြုံရေး" သို့မဟုတ် "လုံခြုံရေးက Settings" ထိုသို့ရိုက်ထည့်ပါ။
အန်းဒရွိုက် 8.0 နှင့်အထက်
ကို Select လုပ်ပါ "Applications ကိုနှင့်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ".
tapnite အပေါ် Next ကို "အဆင့်မြင့် Settings" ကို.
ထို option ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "အထူး Access ကို".
ကို Select လုပ်ပါ "အမည်မသိ၏ applications များ Installing".
လိုချင်သော application ကိုမှအောက်ကိုဆင်းနှင့်နှိပ်ပါ။ program ကိုစာမျက်နှာမှာ switch သည်ကိုအသုံး "ဒီအရင်းအမြစ်မှ installation ကို Allow".
အခုဆိုရင်သင်ဘရောက်ဇာကို update တိုက်ရိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။
Locate နှင့် APK ကို installer ကို browser ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ သင်တစ်ဦးကို PC နှင့်အတူသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဖုန်းမှတတ်နိုင်သမျှအဖြစ် Download, ဒါပေမယ့်အဆုံးစွန်သောအမှု၌, သင်လုံခြုံရေးကိရိယာအန္တာရာယ်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, Play Store ကိုဆာဗာများနှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်သောသူ APKMirror ကဲ့သို့သင့်လျော်သောဆိုဒ်များ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ကနေတစ်ဦးကို Android APK ကိုပေါ်လျှောက်လွှာ Installing
ဖုန်းမှတိုက်ရိုက် APK ကိုလှုလျှင်, သင်ကွန်ပျူတာကိုသုံးပါလျှင်, သင်သည်သင်၏ browser ကို upgrade ချင်ရှိရာ gadget ကချိတ်ဆက်လျက်, ကိရိယာဒေါင်း installation ဖိုင်ကို copy 3. step မှ skip ။
အဆိုပါစူးစမ်းရှာဖွေသူကိုဖွင့်ပြီးဒေါင်း APK ကို၏တည်နေရာမှသူ့ကိုသွားပါ။ ဒါကြောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် update ကို install လုပ်, ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်ဆန္ဒရှိဖိုင်ပေါ်တွင် Tapnite ။
ဤနည်းလမ်းကိုအလွန်လုံခြုံသည်မဟုတ်, ဘာပဲအကြောင်းပြချက်များအတွက် Play Store ကိုမ browser များအဘို့, ကသာအပြည့်အဝလည်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ operating system ကို update ကို၏ဖြစ်နိုင်ခြေအပါအဝင်, ကအန်းဒရွိုက်ဆီကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည် Apple က iPhone ပေါ်မှာ run နေခြင်းဖြစ်သည်။
Method ကို 1: နောက်ဆုံးပေါ် software ကိုဗားရှင်း Install
iOS ကိုအပေါ်ကို default browser ကို Safari ကဖြစ်ပါတယ်။ ကသာ firmware ကို "ပန်းသီး" စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ update လုပ်နိုငျသောကွောငျ့ဤလျှောက်လွှာကိုတင်းတင်း, စနစ်သို့ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်ဖုန်းဆော့ဖျဝဲတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ version ကို install လုပ်ဘို့အများအပြားနည်းလမ်းများရှိပါသည်; သူတို့အားလုံးအောက်က link ကိုမှာပေးလမ်းညွှန်မှုအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: Update ကို iPhone,
Method ကို 2: App Store မှာ
App Store မှာလျှောက်လွှာမှတစ်ဆင့် updated ဟာ operating system အတွက် third-party browser များ။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အလုပျထုံးလုပျနညျးအလိုအလျှောက်ရာအရပ်ကိုကြာပေမယ့်တချို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပျက်ပါဘူးထိုသို့လျှင်, update ကိုကိုယ်တိုင် install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဖွင့်လှစ်ရန် tapnite desktop ပေါ်မှာတွင် App Store ကိုနှင့်တံဆိပ်နေရာချထား။
App Store မှာဖွင့်လှစ်သောအခါ, window ၏အောက်ခြေတွင်ပစ္စည်းနေရာချထား "အပ်ဒိတ်များ" သူ့ကိုသွားပါ။
လျှောက်လွှာစာရင်းကို Locate, သင့် browser ကိုနှင့် button ကို click "Update ကို"အထံတော်သို့လာမယ့်။
အဆိုပါ updates များကိုဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးသွင်းယူမှီတိုင်အောင်စောင့်ပါ။ သုံးစွဲဖို့ဒီ updated browser ကိုအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
အန်းဒရွိုက်ဖို့အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူအဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက် Apple ရဲ့မိုဘိုင်း operating system, ဒါပေမယ့်အချို့ကိစ္စ၌ဤရိုးရှင်းကန့်သတ်လှည့်။
Method ကို 3: iTunes ကို
အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် Third-party browser ကို update လုပ်ဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်း iTunes ကိုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျ ayTyuns 12.6.3 တစ်ခုအဟောင်းတွေဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာရှုပ်ထွေးတဲ့၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းစတိုးဆိုင် applications များဝင်ရောက်ခွင့်ကိုဖယ်ရှားသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့လိုအပ်သမျှအောက်က link ကိုကနေလက်လှမ်းသည်ကို manual တှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။
Read more: iTunes ကို 12.6.3 Download လုပ်ပြီး install
ထို့နောက်ဖွင့်ပါ ayTyuns, သင်၏ PC ကိုမှအိုင်ဖုန်း cable ကိုချိတ်ဆက် device ကို program ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်အထိစောင့်ပါ။
ကို select ရာ Locate နှင့်ပွင့်လင်း menu ကိုပစ္စည်းများ, "Programs ကို".
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "အပ်ဒိတ်များ" နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အားလုံးအစီအစဉ်များကိုအပ်ဒိတ်လုပ်".
iTunes ကိုသတင်းစကားတစ်ခုဖော်ပြရန်ပါဘူးဘို့စောင့်ဆိုင်း "အားလုံးအစီအစဉ်များကို updated နေကြတယ်"ထို့နောက်ဖုန်းအိုင်ကွန်နှင့်အတူမောက် button ကို click လုပ်ပါ။
ကို item ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Programs ကို".
သင့် browser ၏စာရင်းကိုအောက်ကိုဆင်းနှင့် button ကို click "Update ကို"၎င်း၏အမည်ကိုမှ Next ကို။
ပုပ္ပနိမိတ်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ် "updated လိမျ့မညျ"ထိုအခါစာနယ်ဇင်း "Apply" အလုပ်လုပ် window ၏အောက်ခြေတွင်။
ခြယ်လှယ်၏အဆုံးမှာကွန်ပျူတာကနေ device ကို disconnect ။
အထက်ပါနည်းလမ်းအရှိဆုံးအဆင်ပြေသို့မဟုတ်လုံခြုံသည်မဟုတ်, အိုင်ဖုန်း၏အဟောင်းတွေမော်ဒယ်များများအတွက် applications များ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းရဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အမြဲကြောင့်အချက်များတစ်အရေအတွက်ချောချောမွေ့မွေ့မသွားဘူးအန်းဒရွိုက်အတွက် web browser ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ဘို့, နှင့် iOS အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှားနှင့်အမှားခံရပေမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်သီးခြားဆောင်းပါးအတွက် Play စတိုးနှင့်အတူပြဿနာများဖြေရှင်းရေး, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
အသေးစိတ်: အ Play ကိုစျေးကွက်အတွက် updated မ applications များ
အိုင်ဖုန်းတွင်စနစ်တကျသည့်ဖုန်း switched မရနိုငျသောကွောငျ့တစ်ခု update ကိုတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးစနစ်အပျက်ကျမှုဖြစ်ပေါ်စေသည် installed ။ ကျနော်တို့ကသီးခြားဆောင်းပါး၌ဤပြဿနာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။
အဆိုပါတစ်ခုလုံးအဖြစ်စနစ်နှင့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုနှစ်ဦးစလုံး၏အချိန်မီ updates များကိုအသစ်သောအခွင့်အလမ်းများဆောင်ကြဉ်း, ဒါပေမယ့်လည်းအများအပြားအားနည်းချက်များပြင်ဆင်ရန်, ကျူးကျော်သူတွေကဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုတိုးတက်အောင်မသာရှုမြင် updates များကိုတစ်ဦးဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက်အနေဖြင့်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။